အားကစားလုပ်တဲ့အခါ နွေးပြီး ဆန့်တန်းဖို့ ဘာကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ။ Bezzia
အားကစားလုပ်တဲ့အခါ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ဆန့်ထုတ်ဖို့ ဘာကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ။
တောရက်စ် | 14/05/2022 18:00 | လေ့ကျင့်
အားကစားလုပ်တဲ့အခါ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ဆန့်ထုတ်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ခြွင်းချက်မရှိဘဲ အမြဲတမ်းလုပ်နေတာလား။ အကယ်၍ သင်သည် အားကစားကို ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပါက၊ ဆန့်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပူနွေးခြင်း နှစ်ခုစလုံးသည် သင်၏လေ့ကျင့်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ဒါပေမယ့်၊ စတင်သူ သို့မဟုတ် အပျင်းဆုံးသူများအတွက်ကိစ္စအများစုတွင် ၎င်းတို့သည် ဖြတ်သန်းသွားသောအရာများဖြစ်သည်။
ပျင်းရိခြင်းကြောင့် စတင်ရန် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ရွှေ့ရန် ပိုမိုခက်ခဲလာမည် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ လူများစွာက ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိ ပြောကြသည့်စကားများပင်။ ပူပူနွေးနွေး သို့မဟုတ် ဆွဲဆန့်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်ပါ။. အခြားသူများက အချိန်မရှိခြင်းကြောင့် စွန့်စားရသော်လည်း ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ပါက လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်နှင့် ပေါင်းစပ်သင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၊ အမှန်မှာ ၎င်းတို့သည် မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာများကို ရှောင်ရှားရန် အခြေခံအဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
1 အားကစားလုပ်တဲ့အခါ သွေးပူပြီး ဆန့်ထုတ်လို့မရတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေပါ။
1.1 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုလည်း ဖြစ်တယ်။
အားကစားလုပ်တဲ့အခါ သွေးပူပြီး ဆန့်ထုတ်လို့မရတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေပါ။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်တောင် အိမ်မှာ အသာအယာ စက်ဘီးစီးတာထက် ပိုမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ပူနွေးလာခြင်းနှင့် ဆန့်ခြင်းများ သင့်ကြွက်သားများ အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော အဆင့်များ. ဤနည်းဖြင့်၊ အလွန်ပြင်းထန်သော သို့မဟုတ် နာတာရှည်နည်းလမ်းဖြင့် အဆုံးသတ်နိုင်သော ဒဏ်ရာများဖြစ်သည့် ညောင်းညာခြင်း၊ မျက်ရည် သို့မဟုတ် ရောဂါပိုးများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ပိုကျယ်လာတဲ့အတွက် အဆစ်တွေကို ပိုပြင်ဆင်ပြီး ပိုထိရောက်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လေ့ကျင့်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်လို့ပါပဲ။
ဤအရာများသည် ကိုယ်ကာယအဆင့်တွင်ရှိသော အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ၊ အားကစားလုပ်သည့်အခါ နွေးနွေးထွေးထွေးနှင့် အကြောဆန့်ခြင်းသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့် နှလုံးခုန်နှုန်းကို တိုးမြင့်စေသောကြောင့် အခြေခံပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ပြောရရင်၊ သင့်တစ်ကိုယ်လုံး ပိုကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ထားပါ။ အားကစားလုပ်ဖို့။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် ခြွင်းချက်မရှိ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးကောင်းရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုအကြောင်းများအပြင်၊ အားကစားလုပ်တဲ့အခါ နွေးနွေးထွေးထွေး ဆန့်ထုတ်ပါ။ ဤအရာများသည် အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက် မရှိမဖြစ်အဆင့်များဖြစ်သည်-
အပူပေးသောအခါ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတိုးစေသည်။ ကြွက်သားခွန်အားကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ပိုထိရောက်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုကို သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ်၏ အဓိက ကြွက်သားများ ပါဝင်သော အခြေခံ လေ့ကျင့်မှု အောက်ဆီဂျင် ပိုယူပါ။ ကြိုတင်အပူပေးခြင်းဖြင့်
သည်အတွက် မရှိမဖြစ် ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာများကိုကာကွယ်ပါ။ ကြွက်သား
ပင်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ရာမှာ ကူညီပေးတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းမစခင်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ပိုစိတ်အားထက်သန်စေမယ့် endorphin တွေကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်ကို ဆန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အရိုးများ ၊ အဆစ်များနှင့် ကြွက်သားများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြင်ဆင်ပါ။ လေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်း မိမိကိုယ်တိုင် ပေးလှူခြင်း။
၎င်းတို့သည် အခြားသူများကြားတွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် တိုးတက်စေသည်။စွမ်းဆောင်ရည်၊ သွေးလည်ပတ်မှုနှင့် ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေပါသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုလည်း ဖြစ်တယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ဆန့်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ မိနစ်တွေအတွင်းမှာ၊ သင့်စိတ်ကို အမှန်တကယ် ထိရောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအတွက် အဆင့်တိုင်းကို အခြေခံထားပါတယ်။ ပူနွေးသောတက်၌ ခန္ဓာကိုယ်သည် endorphin ကိုစတင်ထုတ်လွှတ်သည်။ သင့်အား ပိုမိုလှုပ်ရှားတက်ကြွစေပြီး စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်စေသော၊ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်သည် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း၊ ဆွဲဆန့်တဲ့ အချိန်မှာတော့ သင်ဟာ အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ပါတယ်။
သင် ဆန့်ကျင့်ရန် အမှန်တကယ် အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် ထိုမိနစ်များသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ် ဆန့်ကျင့်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ခံစားချက်၊ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် အရည်အသွေးရှိသော အချိန်ဖြစ်သည်။. ထိုအချိန်တွင် လုံးဝသတိရှိရမည်၊ သင်၏ကြွက်သားများနှင့် အဆစ်များ ဆန့်ထွက်နေသည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အားကစားလုပ်တဲ့အခါ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ဆန့်ထုတ်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိပြီးတဲ့အခါ သင့်လေ့ကျင့်ရေးမှာ ဒီလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကို ထည့်သွင်းရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကို သင်သေချာပေါက် သိချင်ပါတယ်။ Bezzia နှင့်လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုးမျိုးကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။r ဒီအယူအဆအတိုင်းပဲ၊ ဆန့် အားလုံးအတွက်။ မိနစ်အနည်းငယ်သာ ကြာမည်ဖြစ်သော်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ နွေးနွေးထွေးထွေး ဆန့်ထုတ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို သင်ချက်ချင်း သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးမှာ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ဆန့်ထုတ်တာက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးရင် ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » လေ့ကျင့် » အားကစားလုပ်တဲ့အခါ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ဆန့်ထုတ်ဖို့ ဘာကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ။
နွေဦး/နွေရာသီ 2022 ခုနှစ်အတွက် မိတ်ကပ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
အိမ်တွင် နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် သော့များ